Man United Oo Godkeeda Biyo Ugu Galeen, Wixii Ay Ka Baqayeen Oo Dhacay & Laba Kooxood Oo Doonista Jadon Sancho Kaga Horreeya - Gool24.Net
Man United Oo Godkeeda Biyo Ugu Galeen, Wixii Ay Ka Baqayeen Oo Dhacay & Laba Kooxood Oo Doonista Jadon Sancho Kaga Horreeya
Kooxda Manchester United ayaa u muuqata mid aan kali ku noqon doonin doonista garabka weerar ee Borussia Dortmund ee Jadon Sancho marka uu suuqa January furmo amaba uu dib u furmo suuqa xagaagu sanadka dambe badhtankiisa.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, Red Devils ayaa tartan adag kala kulmi doon kooxda ay Premier League ku xifaaltamaan ee Liverpool iyo waliba Bayern Munich.
Man United ayaan wax qarsoon ka dhigin rabitaankooda ah saxeexa Sancho balse Dortmund ayaa dul dhigtay lacag 108 Milyan oo Pound ah taas oo ay diiday kooxda ree England inay bixiso.
Man United ayaa la wada filayay in haddiiba ay suuqii xidhmay ka faa’idaysan weydo la saxeexashada Jadon Sancho ay kooxo kale oo waaweyni la damci doonaan 20 sano jirkaas sanadka dambe iyadoo ay isla sidii hadda dhacayso.
Wargeyska England kasoo baxa ee The Independent ayaa hadda sheegaya in Bayern Munich iyo Liverpool ay haystaan fursad ka badan mida ay Manchester ugu dambayn kula saxeexan karto Jadon.
Manchester ayaa la filayaa inay markale saxeexa Sancho ku noqon doonto xagaaga dambe laakiin kooxo ay ugu horreyso Liverpool ayaa la filayaa inay la tartami doonaan iyadoo uu tababare Jurgen Klopp hore gaar ahaan ula hadlay xiddiga.
Si kastaba ha ahaatee, Sancho ayaa xagaagan doonayay inuu ku biiro Manchester United isla markaasna sidoo kale rabay inuusan Borussia qaab xun uga bixin oo uusan ku qasbin inay iska fasaxaan.